Raphaël Varane, oo jilbaha heysta
Kooxda Villarreal waxaa daqiiqadii afraad hogaanka ciyaarta u dhiibay laacibka khadka dhexe ka ciyaara ee Santi Cazorla, laakin saddex daqiiqo kaddib hogaamiyaasha kubadda cagta Yurub jawaab ayay ka bixisay, ka gadaal marki uu goolka bareejada u saxiixay Karim Benzema.
Daqiiqadii 20-aad ee ciyaarta ayay Real mar kale keeneen gool uu u dhaliyay Raphael Varane. Hase yeeshee waxaa guushaasi Real u diiday laacibki hore ee kooxda Arsenal Cazorla oo isagu dhaliyay goolka niyadda ka jebiyay tababaraha Real Madrid ee barbaraha.
Laacibkaan u dhashay dalka Spain ayaa garoonada uga maqnaa dhaawac xun oo jilibka ka gaaray muddo laba sana ah. 34 jirkaan ayaa u muuqday muddadi uu dhaawaca ku maqnaa mid ka quustay ciyaaraha, balse hadda dib ayuu uga soo iftiimay fagaarayaasha kubadda cagta.
Natiijadaasi waxay Real uga dhigantahay in ay 7 dhibcood ka hooseyso hogaamiyaasha horyaalka ee Barcelona. Waxana ay Real Madrid hadda ku jirtaa kaalinta afraad.
Halka Villareal ay ku jirto kaalinta 17-aad ee qeybaha hoose ee horyaalka La Liga.